Spotify ugu dambayntii waxay ku dhawaaqeysaa nooca HiFi iyada oo aan tayada lumin | Androidsis
Spotify wuxuu ahaa adeegii muusigga ee ugu horreeyay ee suuq galiya, iyo sida WhatsApp oo kale, way guuleysatay waxayna noqotay tixraac suuqa, suuq ay ku xoog badan yihiin ku dhowaad 350 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon oo ka mid ah macaamiisha iyo isticmaalayaasha nooca bilaashka ah.
Si kastaba ha noqotee, markii in ka badan 12 sano ay ka soo wareegtay markii la bilaabay, wali may bixin adeeg aaminnimo oo sare ah sida kan aan ka heli karno Tidal tan iyo markii la bilaabay iyo Amazon Prime HD, oo la heli karo dhowr sano oo soo gaadhay Spain dhamaadka sanadkii hore.
Muuji Helitaanka HiFi iyo Qiimeynta
Shirkada muusigga ee iswiidhishka ah ayaa ku dhawaaqday Spotify HiFi, oo ah adeegga muusigga oo aan luminaynin tayada oo bilaabi doona inuu adduunka si tartiib tartiib ah u gaaro, in kasta oo aan khariidad la cayimin si aan wax uga ogaanno goorta aan awood u yeelo inaad ku raaxaysato.
Qiimaha, weli lama shaacin waxa ay noqon doonaan, laakiin waxay u badan tahay inay isku mid yihiin oo aan hadda ka heli karno Tidal, oo ah adeeggii ugu horreeyay ee muusigga ee qulqulaya kaasoo bilaabay nooc hi-fi ah, 19,99 euro bishiiba .
Amazon Prime HD, oo aan hada kireysan karno kuna raaxeysan karno 3 bilood gebi ahaanba bilaash, waxay leedahay qiimo dhan 19,99 euro bishii, waa qiimo la dhimay oo laga dhigayo 14,99 euro haddii aan nahay dadka isticmaala Ra'iisul Wasaaraha, marka waa priori, Waa kan ugu raqiisan ikhtiyaarka suuqa.
Adeegga muusigga ee qulqulaya ee Apple weli ma bixiyo, 6 sano kadib markii la bilaabay, oo ah nooca hi-fi, in kasta oo Apple ay sii wadayso ballanqaadkeeda muusigga xilligan la joogona ay u muuqato in qaabkani aanu ku jirin qorshayaasha mustaqbalka ee shirkadda ku saleysan Cupertino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Streaming » Spotify ayaa ugu dambayntii ku dhawaaqday nooca 'HiFi' iyada oo aan lumin tayada